လှပသောဆံသားများအတွက် ကျန်းမာသော ဦးရေပြားမရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ဦးရေပြားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ခေါင်းလျှော်ရည်များ၊ ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများကို ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ အဆီပြန်ဦးရေပြား၊ ယားယံသောဦးရေပြား၊ ဦးရေပြားအရေခွံကွာကျခြင်း အစရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဦးရေပြဿနာ တို့ပေါ်မူတည်၍ ခွဲခြားစွာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ဂျွတ်ပွေးနာနှင့် ဦးရေပြား မှိုစွဲခြင်းရောဂါတို့တွင် ဦးရေပြားအရေခွံကွာခြင်း ပုံစံအမျိုးမျိုး (ခြောက်သွေ့သော ဦးရေပြား၊ အဆီပြန်ဦးရေပြား အဖက်လိုက်ကွာကျခြင်း) ပေါ်မူတည်၍ ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ဦးရေပြားနှင့်ဆံသားထိန်းသိမ်းမှု ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့် အကြံပေးချက်များ
ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့် ဆံကေသာဖြစ်‌အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဆံပင်သန်ပြီး တောက်ပြောင်ဖို့က ဉီးရေပြားထဲမှာရှိတဲ့ ဆံပင်အမြစ်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။ အဆီပြန်ခြင်း၊ ဦးရေပြားယားယံခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတွေက မမျှတမှုတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို ဘယ်လိုလျှော်ပြီး ထိန်းသိမ်းရမလဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗောက်၊ မိတ်တွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ?
ဗောက်ဆိုသည့်အရာဟာ အတော်ဒုက္ခပေးပြီး ဦးရေပြားများ၊ ဆဲလ်အသစ်တွေ အများအပြားဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။ တချို့အရာတွေကြောင့် ပိုဆိုးစေပြီး ကုသမှုနည်းလမ်းတွေက ပြဿနာအရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတတ်တယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလ? ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဦးရေပြားဖြစ်အောင် လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။